Wiil Yar Oo Uu Dhalay Hogaamiyaha Kooxda Daacish Abubakar Al-baqdaadi Oo La Dilay - Wargane News
Home Somali News Wiil Yar Oo Uu Dhalay Hogaamiyaha Kooxda Daacish Abubakar Al-baqdaadi Oo La...
Wiil Yar Oo Uu Dhalay Hogaamiyaha Kooxda Daacish Abubakar Al-baqdaadi Oo La Dilay
Wiil uu dhalay hogaamiyaha kooxda Daacish, Abuubakar al Baqdaadi, ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay waddanka Suuriya, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka AMAQ ee kooxda IS u faafisa wararka. Iyada oo maalmihii ugu dambeeyey dalkaasi Suuriya laga hadal hayay xaaladdan dilka wiilkaasi.
Xudayfa al-Badri oo ka mid ah ubadka uu dhalay Abuu Bakar Al-Baqdaadi ayaa ku dhintay hawl-gal kumaandows oo ka dhan ahaa xukuumadda Suuriya iyo Xoogagga Ruushka, meel dabka laga dhaliyo oo ku taalla gobolka Xums, sida lagu qoray farriin la soo dhigay barta Telegram.
Faahfaahin dheeraad ah lama bixin, laakiinse waxaa lagu daray muuqaalka ninkaas dhallinyarada ah oo middi haysta.
Halka uu ku sugan yahay aabihiis oo magaciisa runta ah uu yahay Ibraahin Cawad Ibraahim al Badri – ayaan la ogeyn, laakiin farriintu waxay muujinaysaa inuu weli nool yahay. Baqdaadi oo madaxiisa la dul dhigay $25 malyan oo Dollar, waxaa dhowr mar la sheegay in la dilay ama la dhaawacay.
Warkiisa lama maqlin tan iyo Bishii September ee sannadkii 2017, markaasoo uu taageerayaashiisa ka codsaday inay weerar ku qaadaan reer galbeedka, ayna sii wadaan dagaalka Suuriya iyo Ciraaq balse wixii intaa ka dambeeyey ay kooxda Daacish soo food saartay dhibaato weyni kadib markii lagu jabiyey magaalooyin ay ka daganaayeen dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Wararka ka imanaya dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa sheegaya in si weyn ay u wiiqantay awooddii dawladda Khilaafada Islaamka ah isku magacaabi jirtay ee uu hormuudka u ahaa ninkan wiilkiisa yar la dilay.
Somaliland: Madaxweynaha Siilaanyo Oo Qaabiley Saddex Danjire Oo Reer Yurub ah